मुन्डो नदीको स्रोत, एक प्रभावशाली प्राकृतिक घटना | यात्रा समाचार
लुइस मार्टिनो | 27/03/2021 15:00 | Ecotourism, गेटवे
मुन्डो नदीको स्रोत यस प्रान्तको सब भन्दा सुन्दर प्राकृतिक घटना हो Albacete। यसलाई हेर्दा, तपाईं सोच्नुहुन्छ कि तपाईं झरनामा हुनुहुन्छ हवाई। यद्यपि, तपाई यसमा हुनुहुन्छ Alcaraz पहाड श्रृंखला, ती मेक अप गर्नेहरू मध्ये एक प्रिबेटिक पर्वत श्रृंखला.
मुन्डो नदी यस नदीको सहायक नदी हो Segura, जसमा यो प्राप्त भए पछि सम्मिलित हुन्छ, बारीमा, नदीहरू बोगरा र को भेगा डे रीपर। तर पहिले, यसले एउटा टूर लिन्छ जुन धेरै शहरहरू पार गर्दछ, प्रत्येक एक अर्को सुन्दर र ऐतिहासिक। यद्यपि हामी अनुमान गर्न लाग्दैनौं। मुन्डो नदीको स्रोतबाट सुरू गरौं।
1 मुन्डो नदीको जन्म, एक अद्वितीय घटना
1.1 कहिले जाने र त्यहाँ कसरी पुग्ने
1.2 मुन्डो नदीको स्रोतको पैदल यात्रा मार्ग
2 मुन्डो नदी मार्ग
मुन्डो नदीको जन्म, एक अद्वितीय घटना
हामीले भनेको जस्तै, मुन्डो नदी अल्कारज पर्वत श्रृंखलामा जन्म भएको छ। विशेष रूपमा, यो धेरै गहिरो गुफाबाट बाहिर जान्छ। तिनीहरू यो बत्तीस किलोमिटरबाट चिनिन्छन्। पछाडि, खाली खाली ठाडो कार्ट पहाडको शीर्षमा रहेको छ।
यस वर्गको चट्टानमा झरझरा ठाउँहरू छन् जसबाट पानी बग्दछ। यसैले, मुन्डो नदी जेट यो एक झरनाको रूपमा खस्छ जब लग्सनहरू बनाउने क्रममा छ। यीबाट, यसले यसको प्रवाह विकास गर्दछ। पानीबाट बाहिर निस्किने दृश्य र वनस्पति बिचको बीचमा पर्ने यो अनौंठो दृश्य हो।
कहिले जाने र त्यहाँ कसरी पुग्ने
तपाईको सबै भव्यतामा मुण्डो नदीको स्रोत हेर्नका लागि उत्तम समय हो वसन्त। तब पानीको जेट प्रभावकारी शक्तिको साथ बाहिर आउँदछ जुन एक घटनामा लोकप्रिय छ "प्रहार"।
नदी जन्म भएको ठाउँमा पुग्न, तपाईंले कार प्रयोग गर्नुपर्नेछ। पछि रियोपार, तपाइँ गइरहेको छ कि सडक लिन पर्छ साइल्स। लगभग छ किलोमिटर पछि तपाईले विचलन पाउनुहुनेछ जुन स्रोतमा जान्छ। तपाईं दुई किलोमिटर यात्रा पछि यो पुग्नुहुनेछ। पार्कि aboutको बारेमा चिन्ता नलिनुहोस् किनभने तपाईंसँग एक छ पार्किङ एक सय कार र छ वटा बसहरूको लागि क्षमता। तर, स्रोत हेरेपछि तपाईसँग अझै मुण्डो नदीको किनारमा पुग्नु धेरै छ।
मुन्डो नदीको स्रोतको पैदल यात्रा मार्ग
हामीले सिफारिस गर्न चाहेको पहिलो कुरा तपाईले यो सुन्दर पैदल यात्रा गर्नु हो। नदीको जन्म भएको र त्यहाँ करिब सात किलोमिटर लम्बाइ भएको ठाउँमा उही ठाउँको अंश। जहाँसम्म, यो मार्ग सजिलो छैन किनकि यसले १ XNUMX,०० मिटरसम्मको उचाइबाट यात्रा गर्दछ केही खतरनाक.
जहाँसम्म, यदि तपाईंले यो गर्ने निर्णय गर्नुभयो भने, तपाईं ल्याण्डस्केपबाट चकित हुनुहुनेछ। वास्तवमा यो माध्यमबाट चल्छ Calares डेल मुन्डो र ला Sima प्राकृतिक पार्क। थप रूपमा, मार्ग गुफाको मुखमा पुग्छ जुन मार्फत मुन्डो नदी देखा पर्छ। यो गर्नका लागि तपाईलाई एउटा विशेष प्राधिकरणको आवश्यक पर्दछ जसले तपाईंलाई केभिंग उपकरणको आवाश्यकता बिना करीव १ XNUMX० मिटर भित्र पस्न अनुमति दिन्छ। तर कहिले पनि अगाडि बढ्ने प्रयास नगर्नुहोस्। यो संघीय पेशेवरहरूका लागि मात्र उपयुक्त छ।
जे भए पनि मार्ग यसको लायक छ। तपाईले आफ्नै ठाउँहरू देख्नु हुनेछ क्यालर डेल मुन्डो, प्रचुर सिन्खोलहरूको साथ पठार, जसबाट पानी गुफामा फिल्टर हुन्छ। पछि, यो खालीले मुन्डो नदीको स्रोतलाई जन्म दिदै यसलाई बाहिर निकाल्नेछ। तपाईले गिद्ध, चील र यस क्षेत्रमा अन्य प्रजातिहरू पनि देख्नुहुनेछ।
मुन्डो नदी मार्ग
मुन्डो नदीको स्रोत मात्र सुन्दर छैन। यो Segura मा समाप्त नभएसम्म आफ्नो यात्रा जारी राख्न यो लायक छ। यो यात्रा को माध्यम बाट जान्छ धेरै सुन्दर शहरहरु जसको हामी अर्को तपाईसँग कुरा गर्नेछौं।
यो सानो शहरले सम्पूर्ण क्षेत्रको सबै भन्दा पुरानो स्मारक सम्पदा राख्दछ। यसमा हामी तपाईंलाई सिफारिस गर्दछौं कि अवशेषहरूको अवलोकन गर्नुहोस् महल-किल्ला मुस्लिम युग र पवित्र आत्माको चर्च, १ the औं शताब्दीमा निर्मित, तर पूर्ण रूपमा पुनर्स्थापित भयो र गोथिक फ्रेस्कोहरू छ।
Riópar को दृश्य
साथै, तपाई रिपरमा देख्न सक्नुहुन्छ सान जुआन डे अल्कारजको शाही कारखानाहरूको संग्रहालय। यो १ the औं २० औं शताब्दीको बीचमा बसालिएको काँसा र काँसाका कारखानाहरूको जीवन्त गवाही हो जुन राजाको आदेशले सिर्जना गरिएको थियो। कार्लोस III.
नगरपालिकामा अवस्थित मोलिनिकोसयस क्षेत्रलाई राम्रुमोको नामले चिनिन्थ्यो। यो विशेषाधिकार प्राप्त प्रकृतिको वातावरणमा छ, पाइनहरू र मशरूमहरूको प्रशस्ततासहित। थप रूपमा, तपाईलाई यसको विशिष्ट विशिष्ट सडकहरूमा हिंड्न र यसको पुरानो लुन्ड्री हेर्नको लागि यो धेरै रमाईलो हुनेछ।
अधिक ईन्डो जिल्लाको साथ गर्नुपर्दछ, मुन्डो नदीको बाँया तटमा अवस्थित एउटा सानो शहर ईसोको साथ। यसमा, तपाईं भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ स्यान्टियागो अपोस्टोलको चर्च, अठारहौं शताब्दीमा निर्मित र जसमा इसोको संरक्षकको छवि रहेको छ, र अल्मोहद टावर XIII को कि आज एक महल समावेश छ।
तर सबै भन्दा माथि, हामी तपाईंलाई बिभिन्न हेर्न सल्लाह दिन्छौं पुलहरू त्यो नदी पार। तिनीहरू परम्परागत रूपमा रोमन मानिन्छन्, यद्यपि ती पछि छन्। तर, जे भए पनि, तिनीहरू महान सौन्दर्यको परिदृश्यको अंश हुन्।
पनि भनिन्छ «सेराना रत्न»यो शहर चलचित्र प्रेमीहरूको लागि तीर्थस्थल हो 'सूर्योदय, जुन कुनै सानो कुरा होइन', किनकि यो आंशिक रूपमा यसको सडकमा गोली हानिएको थियो। तर यसको चासोका अन्य बुँदाहरू पनि छन्, यसको साँघुरो र काब्ल्ड सडकहरूबाट सुरू गरेर।
तपाईं भेट्न सक्नुहुन्छ प्यारीस चर्च अफ एस्प्शन, १ XNUMX औं शताब्दीमा निर्मित। भित्र, तपाईं पनि एक प्रभावशाली देख्न सक्नुहुन्छ बारोक अ organ्ग XVII को। तपाईं पनि अन्तर्गत जान सक्नुहुन्छ आर्को डे ला मोरा, जो जादू को बारे मा यसको आफ्नै कथा छ; एक्वेक्टक्ट र हाइड्रोलिक मिलहरूको भ्रमण गर्नुहोस् र नजिक जानुहोस् Híjar दृष्टिकोण, जसले तपाईंलाई अल्बासेटको पहाडहरूका दर्शनीय दृश्यहरू प्रदान गर्दछ।
Férez को दृश्य
अन्त्यमा, हामी तपाईंलाई यस शहरको बारेमा बताउनेछौं जुन माथि उल्लिखित फिल्मको दृश्य पनि थियो। थप रूपमा, तपाई यसमा देख्न सक्नुहुनेछ स्यान्टियागो अपोस्टोलको चर्च, जो सांस्कृतिक चासोको साइट हो र जसले सुन्दर एस्पिनो चैपल राख्छ; को बेर्मलको हाम्रो महिलाको Hermitage, यसको सुन्दर पोलीक्रोम वेदीपिस, र कन्भेन्ट र Discalced Carmelites को चर्च, १th औं शताब्दीको अन्तमा निर्मित।
अन्तमा, मुन्डो नदीको स्रोतमा कास्टिला-ला मन्चा, तपाईंलाई उत्कृष्ट सुन्दरताको प्राकृतिक दृश्य प्रदान गर्दछ। तर यसको वरपरको क्षेत्र पनि यसको धनी स्मारक सम्पदा र यसको ठूलो पारिस्थितिक मूल्यको लागि तपाईंको भ्रमणको योग्य छ। के तपाई त्यो क्षेत्र जान्न चाहानुहुन्न?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » गेटवे » मुन्डो नदीको स्रोत